Yintoni onokuyilindela uMninimzi wakho onguNyaka ePhakamileyo
Yintoni onokuyilindela uMfaki wakho onguNyaka weZikolo eziPhakamileyo
Ukuhamba ngeNdlela yakho Ngokunonophelo kwiBakala lesi-9
Wamkelekile kumntu wakho omtsha unyaka wesikolo esiphakeme! I-Junior ephakamileyo (okanye isikolo esiphakathi kwabanye) ngoku ilandelayo, kwaye ngoku ungena kwihlabathi elitsha kunye "nezingane ezinkulu." Kodwa yintoni omele ulindele ukuba unyaka omtsha wesikolo esiphakeme? Ukwazi okumele ulindele ngaphambi kokuba uhambe ngezo ngcango kunokukunceda ukunciphisa uxinzelelo kunye noxhala lokungena kwi-9 kwibanga apho yonke into ibonakala ingaqhelekanga kuwe.
Abadala babonakala bakhulu kakhulu
Xa uqala ukungena esikolweni esiphakamileyo ungaphandle kwenyuka phezulu kwaye 18 ubonakala kakhulu, kude kakhulu. Abadala baya kuhamba nge-swagger. Baye kunyaka wabo wokugqibela, kwaye bayazi le nkqubo. Bayiqonda isikolo ongeyonto, kwaye uyayibona ekukholweni kwayo kunye nemihlali malunga nokuba phezulu kwinqanaba le-high school. Ewe, njenge-newbie, oko kuthetha ukuba unokwesabisa kakhulu ngabantu abadala. Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbini okumele uzikhumbule: bekunye apho ukhona kwaye ngolunye usuku uya kuba ngumnye walabo badala. Mhlawumbi akenzi ukuba babonakale bepholile okanye babalulekile kodwa bangenza ungatshitshiswa.
Ukuya kwiKlasi ibonakala ifuna iGPS
Izikolo eziphakamileyo zivame ukuba zikhulu kunanoma yiphina isikolo oye waya kuso. Ngokuqhelekileyo babonakala befuna i-GPS ukuba ifike kwindawo ethile. Kubalulekile ukuthatha iintsuku zokuqhelanisa ngokugqithiseleyo ukuze ukwazi ukufumana indlela yakho. Thatha ishedyuli yakho kwaye uhambehamba ngamaxesha ambalwa ngaphambi kosuku lokuqala lwesikolo. Misa i-locker yakho ekuqaleni ukwenzela ukuba ungaboni usuku 1. Unyaka wakho omtsha wesikolo esiphakamileyo ugcwele amava amatsha, ngoko ukuba uyazi ukuba ungena, uziva ukhululeke ngakumbi uya kuziva ukhawuleza.
Uya kwenza abahlobo abatsha
Ukwenza abahlobo abatsha banomdla kwaye basongela esikolweni esiphakeme. Uza kuthatha iiklasi nabantu ongakaze udibane phambi kwabo abaneembono zehlabathi ezintsha. Awuqinisekanga ukuba abahlobo bakho baya kubelana ngesidlo sakusihlwa okanye ihholo lokufunda ukuze uhlale uvulekile ukufumana abanye ukuba uhlale nabo ngelo xesha. Abanye abatsha baya kuhamba kwimeko efanayo nawe, kwaye baya kufuna umntu ukuba ahlale naye. Ukuba ubona omnye umntu onqabileyo, uvula isihlalo kubo etafileni yakho. UThixo usicela ukuba sijonge omnye nomnye, nakwiziko eliphakamileyo. Kwakhona, xa usenza abahlobo abatsha , qi niseka ukuba ube nolwazi oluncinane. Ufuna ukuqinisekisa ukuba ujikeleze nabanye abaya kukuhlonela ukholo lwakho kunye nokukhetha kwakho.
Ootitshala balindele ngakumbi
Xa uhamba ukusuka kwibanga lesi-6 ukuya kwisikolo esiphakathi, ubone ikhosi yakho ishintshela apho bekube nzima khona. Unokulindela unyaka wakho omtsha ukuba awuyi kuhluka. Ikhosi yakho iya kunyuka kakhulu, kwaye ulindelo oluvela kootitshala bakho luya kuba lukhulu kunelo ngaphambili. Uya kuba nomsebenzi wesikolo ophezulu, amaphepha amaninzi, kunye novavanyo olunzima. Ukufunda indlela yokufunda kakuhle kubaluleke kakhulu kwisikolo esiphakeme.
Kukho iThuba lamathuba amaninzi okwenzayo nokuFunda Izinto
Enye yezinto eziphezulu esikolweni esiphakeme kukuba kukho amathuba amaninzi amaninzi okubandakanyeka kwimisebenzi enomdla. Ngokukhetha i-electives yakho kwimisebenzi yangexesha elithile, eli lixesha lokuba uqale ukuhlola iimfuno zakho. Unokulindela umnyaka wakho omtsha ukukhetha uninzi lwezinto ezithandayo. Ukubandakanyeka kwimisebenzi yexesha elithile kukuvumela ukuba uhlangabezane nabantu abatsha, fumana into onomdla kuyo, uphinde uhlole ukuba ungubani.
Kufuneka Ube Ulungelelwanisiweyo
Ngamathuba onke amatsha, kuya kufuneka ukuba ulungelelanise ngakumbi umnyaka wakho omtsha. Akusoloko kulula ukulinganisela umsebenzi wesikolo, iimvavanyo, amaphepha, imisebenzi yesikolo emva kwesikolweni, imisebenzi yecawa , imisebenzi kunye nokunye. Sekunjalo uyaqonda ukuba, ukuba uqala ukufunda indlela yokulinganisela konke ngoku, uya kuhamba phambi kwekhava xa ufika kwikholejini kunye nabantu abadala. Ukuhlelwa kwexesha lakho ubuchule obuya kukunceda kuzo zonke iinkalo zobomi bakho.
Kukho uxinzelelo oluninzi lwabaontanga
Izilingo zininzi ezikolweni eziphakamileyo. Le yinyani ixesha lokuba ubudlelwane bube lukhulu ngakumbi, amaqela athola i-crazier encinane, kwaye intsha iqala ukuzama utywala kunye neziyobisi. Kufuneka ulindele ukuba unyaka wakho omtsha uzele zonke iintlobo ezintsha zezilingo kunye neengcinezelo zontanga ukwenza kwaye uzame izinto ezintsha ezinokuthiwa ikholo lakho. Nangona ufuna ukwenza abahlobo, kuya kufuneka ugqibe isigqibo sokuba ngamanye amaxesha ukuba ukuthandwa okanye ubuhlobo bakho noThixo kubaluleke kakhulu. Ukwazi ukwazi ukunqoba izilingo kunokubaluleka kokuqhubeka nokuhamba ngokholo ngunyaka obalaseleyo esikolweni esiphakeme.
Isihluthulelo sokwenza ukuba umnqweno wakho omtsha uphumelele ukukwazi ukuba kuya kutshintsha, kungakhathaliseki ukuba yintoni. Isikolo esiphakamileyo ngamava amatsha-kunzima kodwa kunomvuzo. Ukhula kwaye uqhube phambili, kwaye naliphi na ixesha elenzekayo, utshintsho luya. Yamkela kwaye uyamkele utshintsho. Ngona nxalenye enkulu, utshintsho luhle. Ukuba ulindele ukuba unyaka wakho omtsha uzaliswe utshintsho, kuya kwenza ukuba utshintsho lube lula kakhulu.
Iindlela Zentsha Yamaqela Inokufikelela Kwiintsholongwane ZamaKristu
Umthandazo kwixesha leMviwo
Indlela Yokuyihlolela IBhayibhile Yakho Isifundo
Umthandazo wokufumana iziqu kubafundi abangamaKristu
Umthandazo ongumKristu wexesha elixinezelekileyo
Abafundi bamkelwa kwiKholeji yakwaMesiya
Iingoma zeHlabathi zeHalloween
Ukunyuka kweHarney Peak: High Point yaseMzantsi Dakota
Iimpapasho eziphezulu zegama lesiFrentshi kunye neengxaki
Ukuqonda i-Neoplatonism, i-Intelligence Interpretation of Platio
Iingcebiso ezi-7 zokunqoba ukwesaba kwesiteji
Funda Ngokusebenzisa Amanyathelo aseJava